Taariikhda My Butros » Top 5 Movies saare Chick Wixii Lovers
Top 5 Movies saare Chick Wixii Lovers
Last updated: Oct. 29 2020 | 2 min akhri
Wixii Mudanayaal ka ... si fiican u, waxa ay leedahay Patrick Swayze. Ma u baahan tahay waxaan idinku more? Wixii guys, waxay leedahay line sheeko xiiso leh, riwaayadaha, mu'aamaraad, khiyaanay, iyo qaar ka mid ah goobaha halkii funny ay bixiso Whoopi Goldberg. Iyo soo afjaridda aan la garaaci karaan! Hubi inaad Kleenex on gacanta u ilmaynaya kuwa qalajin.
"Tani oldie, laakiin Goodie "qoreysa Kevin Costner iyo dabayaaqadii Whitney Houston. Waxaa ayaa sheegay sheekada ah "Diva" jilaa oo noloshiisa halis ugu jiraan mid ka mid ah iyada "Taageerayaasha" oo markii dambe lagu qasbay in ay keenaan on a "waardiye" in iyada loo ilaaliyo. Gala Kevin Kostner. Laga soo tago in taataabtay, movie tani waxaa si fiican u qoran, bixio, oo ay ka buuxaan tallaabo. Waan ku siin 5 xiddigaha u qiimo madadaalada! Oo waxaad doono mid aad u.
Waxaad jeclaan doonaa ee dhexgalka iyo "walaaltinimada" of this tuurayeen qurux badan, oo xambaarsan Morris Chestanut, D, L. Hughley, Bill Bellamy, iyo Shemar Moore. Halkan ka 4-1-1: afar saaxiibada nolosha oo dhan la arrimaha xiriirka ay qabtaan, naanka, oo daahfurtay nolosha. Laakiin waa wax ka badan in. Waxay loolan ku dhaqanka qoyska, waajahaan ku qufulan iyo dumarka u janjeedha, iyo waxyaabo badan oo dhan in ka badan. Waa funny, sexy, iyo smart. Waxaa kale oo bilow ah wada hadal weyn ... haddii aad tahay galay in.
Ku cusbaa EE kubada
Roger Ebert waxaa loogu magac daray, "Filimka ugu Fiican ee sanadka!"
Movie Tani waxay ku siinaysaa qeexid dhan oo cusub in xaaladda xiriirka: "Waa ay adag tahay."
Waxaa xidigaha Halle Berry, Billy Bob Thornton, iyo Heath Ledger. "Ball" ayaa sheegay sheekada isku dhac ah, ilaalin xabsi ugu direen oo noqda lug leh naagtii nin oo la isku filnaansho dhawro. Waa graphic, ceeriin, madaama lugtii, iyo israac. Berry ee qadaf dhaqaajinta "Leticia" halkan Award Academy ah iyada kasbatay. Baro waxa ka "tijaabadooda" waa saabsan.
Maxaad helaysaa marka aad isu geeyo James Earl Jones, Diahann Carroll, lix kids, iyo shaqaalaha daryeelka a? Dhibkeed Qosol, jeclahay, iyo koritaanka, (iyo ma ahan oo keliya ama carruurta la).
Laga soo tago in aadna madadaalo, waxa ay leedahay music weyn in jeexdin in, mahadcelineysaa Gladys Knight. Ha ka maqnaan!
Waa Jacaylka Dogs